Ciidanka NISA oo qabtay gaari waxyaabaha qarxa iyo hub kale laga soo buuxiyay (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka NISA oo qabtay gaari waxyaabaha qarxa iyo hub kale laga soo buuxiyay (SAWIRO)
Ciidamada nabad-sugiddda qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgal ay habeenkii xalay ka sameeyeen suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxay kusoo qabteen gaari la sheegay in laga soo buxiyey walxaha qarxa iyo hub kale.
Gaarigaasi ayaa sida la sheegay laga soo qabtay Hoteel Cimraan oo ka mid ah hoteelada ku yaala suuqa Bakaaraha ee Muqdisho, waxaana gaarigaasi lala soo qabtay dadkii watay iyo dad kale oo laga shakisan yahay.
Cabdi Kaamil Macalin Shukri oo ah afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan dadkii lahaa gaarigaan miineysnaa iyo dad kale oo la tuhmayo.
“Waxaa howlgalkaan la fuliyay kadib markii warbixino laga helay Hoteel ku yaalo suuqa Bakaaraha oo lagu magacaabo Cimraan inuu yaalo gaari waxyaabaha qarxa iyo hub ay saaran yihiin, gaarigaasi taarikadiisa waa (AA9849) ciidamada ayaana u suura-gashay inay si nabad ah kusoo qabtaan gaarigaasi iyo dad lagu tuhmaayo.” Sidaas waxaa yiri afhayeenka wasaarada amniga gudaha Cabdi Kaamil Macalin Shukri.
Ilaa iyo haatan ma irto wax faah faahin kale oo intaas dheer oo laga helayo howgalkaan, waxayna arrintaan kusoo beegmaysaa xilli maalintii shalay ay magaalada Muqdisho ka dhaceen qaraxyo ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaadiid laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, iyadoona qaraxyadaasi ay dad badan ku geeriyootay halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen.